SMMS ပြင်ပတွင်ကားတစ်စီးဖုံး - တရုတ် J ကိုနှင့် K အော်တိုဆက်စပ်ပစ္စည်း
multi အလွှာမဟုတ်သောရက်အင်္ဂါရပ်များနှင့်အားသာချက်များ: 1.Outdoor အားလုံးရာသီဥတုအခွအေနေကားတစ်စီးအဖုံး။ ကောင်းသော dustproof, breathableability အဖြစ်ကောင်းသောရေစိုခံနိုင်စွမ်း 2.With ။ မီးခိုးရောင်သို့မဟုတ်အနက်ရောင်သို့မဟုတ်မီးခိုးရောင်အရောင် 3.In သင်သည်ကားတစ်စီးပေါ်ဖုံးဖိထားရန် 4.With ရှေ့နှင့်နောက် elastic အနားကြိုက်တတ်တဲ့။ ပစ္စည်းအင်ဖို to23.0 Usd15: ပစ္စည်းမဟုတ်တော့ပစ္စည်းဘဝကိုစောင့်ရှောက်ရန်အတွက် 3% ခရမ်းလွန် angent နှင့်အတူပါလိမ့်မယ်, ပစ္စည်းကိုသင်ကြိုက်တတ်တဲ့အဖြစ် 160gsm မှ 130 GSM ကနေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပိုမိုလေးလံသောပိုပြီး du နှစ်ဆချုပ်ရိုး 6.cost အကွာအဝေးတိုးမြှင့် stiches 5.With ...
min အရည်အတွက်: 50-10000
ငွေပေးချေမှုရမည့်: 30% in advance, rest against copy of shipment paper.
ကောင်းသော dustproof, breathableability အဖြစ်ကောင်းသောရေစိုခံနိုင်စွမ်း 2.With ။
4.With မျက်နှာစာများနှင့်ကားကိုအပေါ်ဖုံးဖိထားရန်နောက်ဘက် elastic အနား။
ချုပ်ရိုးတိုးမြှင့်ကို double stiches 5.With
6.cost အကွာအဝေး: Usd15 to23.0
ပစ္စည်းပိုရှည်ပစ္စည်းကိုဘဝကိုစောင့်ရှောက်ရန်အတွက် 3% ခရမ်းလွန် angent နှင့်အတူပါလိမ့်မယ်, ပစ္စည်းကိုပိုမိုလေးလံသောပိုမိုတာရှည်ခံများနှင့်ထို့ထက် ပို. စျေးကြီး, သင်ကြိုက်တတ်တဲ့အဖြစ် 160gsm မှ 130 GSM ကနေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်သင်လိုချင်တာတွေမေးခွန်းထုတ်နှင့်တင်ပြရန်ကြိုဆိုကြသည်, ငါတို့အမြဲသင့်ရဲ့န်ဆောင်မှုမှာဖြစ်လိမ့်မည်, တစ်လောကလုံးနှင့်နှစ်ဦးစလုံးအမျိုးအစားများကိုစိတ်ကြိုက်သည်။
ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအလုပ်မလုပ်, ငါတို့သည်သင်တို့မျှော်လင့်နေကြသည် sedan ကား, SUV ကား, ဗန်, RV နှင့်အခြားသူများပါစေရန်သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်။
အသုံးပြုမှုကိုကားတစ်စီးသင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ကာကွယ်ပေး cover- အဘယ်ကြောင့်သင့်ကားကမ္ဘာတွင်-လျော့နည်းအဝတ်လျှော်သိမ်းဆည်းပါ။
ထိုကဲ့သို့သော dash board ကို, ထိုင်ခုံအဖုံးများကဲ့သို့ကွယ်ပျောက်ဖုန်မှုန့်, ငှက်နှင့်သစ်ပင်ကြမ်းတပြည်ကိုမှသင်၏ကားကိုစောင့်ရှောက်အဖြစ်ကားရဲ့ဆေးသုတ်ကာကွယ်ပေးဖို့ hazord မိုးရွာရွာ, ကားတစ်စီး၏အတွင်းပိုင်းကိုကာကွယ်ရန်မှသကဲ့သို့မော်တော်ကားအဖုံး, dustproof ရေစိုခံများနှင့်ဆန့်ကျင်ခရမ်းလွန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
ကွာသူခိုးကိုသိမ်းဆည်းထားပါ, တစ်ခါတစ်ရံ, သင့် valueable ဥစ္စာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်နှာဖုံးသင့်ကားဖုံးကွယ်နေသောကြောင့်အလွယ်တကူသိမြင်လျှင်ခံရမပါဘဲလည်းကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်။
ဂျေနှင့် K အော်တိုဆက်စပ်ပစ္စည်း 2009 ကနေလိုင်းအတွက်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်, ကုန်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုထုတ်ကုန်ကိုယ်တိုင်ကထံမှ client ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်န်ဆောင်မှုများကိုပေးစွမ်းကြီးမားတဲ့သင်္ဘောကားတစ်စီးဖုံးစက်ရုံနှင့်အမေရိကတိုက်ကနေဥရောပသင်္ဘောတင်သွင်းသူနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းကုန်သည်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
မိတ်ဖက်အစဉ်အဆက်ဆဲအလုပ်လုပ်: Ferrari ပြိုင်ကား, Coverking, ဝါးတားပိုလိုမော်တော်, DS ကိုဖုံးလွှမ်း,3Lines, UKCC, Sparco စသည်တို့ကို
နောက်တစ်ခု: 600D PP ဝါဂွမ်းကျောထောက်နောက်ခံထိုင်ခုံအဖုံး
လူမီနီယမ် clutch ဖုံး
အော်တို clutch ဖုံး
ဘက်ထရီ Terminal နှင့်မျက်နှာဖုံးများ
မော်တော်ကား Outd oor ဖုံး
ကားတစ်စီး Sunshade ဖုံး
ကားတစ်စီး Wing ဖုံး
စိတ်တိုင်းကျ clutch ဖုံး
Dustproof Truck ကားဖုံး
မိုးလုံလေလုံ Sedan ဖုံး
အဆောက်အဦးအပြင် Glass ကိုကားအဖုံး
ဖေ Transparent မော်တော်ကားဖုံး
မော်တော်ကားဖုံး Up ကို Pick
Truck ကားကားဖုံး Up ကို Pick
PVC SUV ကားဖုံး
ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန် Ccar ဖုံး
ပွင့်လင်း PVC ဖုံး
ရေစိုခံ PVC ကာကွယ်ဖုံး
ရေစိုခံ RV ဖုံး
ယက်အထည်အလိပ် RV ဘီးဖုံး
ဖဲ Stretch 1
လူပျိုအလွှာ Nonwoven မိုးလုံလေလုံ 1
Silver, ကိုယ်ရံတော် 150D